အထူးလျှော့စျေးစျေးသွန်းလောင်းသောပုံသွန်းလောင်းသောလိုင်းသည် Foundry အတွက်ဘူး
သွန်း Casting မှိုလိုင်း Founding များအတွက် Casting မှိုဘူးကိုအသုံးပြုပါ
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် - မှိုဘူးများသည်စက်ရုံများတွင်အသုံးပြုသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ မှိုစက်အလုပ်လုပ်သောအခါ, မှိုဘူးအချို့သောဖွဲ့စည်းပုံဖွဲ့စည်းရန်သဲကိုင်ထားသည်။ သွန်းသောသံကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုပုံသွင်းသွန်းခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သောသဲသွပ်ထဲသို့သွန်းလောင်းပြီးနောက်သွန်းသောပစ္စည်းသည်သင်လိုအပ်သည့်သတ္တုများကိုခိုင်မာအောင်ပြုလုပ်ပေးလိမ့်မည်။ ပုံသွင်းသည့်ဘူးများကိုပုံမှန်အားဖြင့်သံသတ္တုဖြင့်ပြုလုပ်ပြီးသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန်ပြုလုပ်သည်။ ငွေသွင်းငွေထုတ်လုပ်ငန်းစဉ် ၁။ ဖောက်သည်မှနမူနာသို့မဟုတ်ပုံဆွဲခြင်း။ 2.Tool ...
flaskless မှိုလိုင်းသဲ Casting Horizontal Casting စက်
အရည်အသွေးမြင့်မားသောညှစ်နေသောသဲမှုတ်စက်ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းထုပ်ပိုးခြင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များကွန်တိန်နာသိုက်များလက်ခံရရှိချိန်မှရက် ၃၀ မှ ၉၀ အတွင်းလျှောက်လွှာ Green သဲပုံသွင်းခြင်းစနစ်သည်ဆေးကုသစဉ်ကာလအတွင်းလုံခြုံ။ လျင်မြန်စွာကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ မှိုကိုင်တွယ်သည့်စနစ်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ထုတ်ကုန်များပေါင်းစပ်အသုံးပြုသောစက်ရုံတစ်ခုစီနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားသည်။ စနစ်၏ Atomization ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးတက်စေနိုင်သည်။ ဒီထက်လူအင်အားလိုအပ်သည်။ ရရှိနိုင်အာကာသနှုန်းအဖြစ်ဒီဇိုင်းနိုင်ပါတယ်။ SF အလျားလိုက်ခွဲခွာခြင်းနှင့်အစင်းပါသည့်သေနတ်များ ...
သွန်း Casting မှိုလိုင်း Founding များအတွက် Casting မှိုသေတ္တာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်
ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေခြင်းထုပ်ပိုးခြင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များ - အဝတ်အချည်းစည်းထုပ်ပိုးခြင်းသို့မဟုတ်သစ်သားသေတ္တာများဖြန့်ဝေခြင်းအသေးစိတ် - အပ်ငွေလက်ခံရရှိပြီးနောက်ရက် ၃၀ အတွင်းကုန်ပစ္စည်းအရောင်းအ ၀ ယ် ၁။ အကြီးစား / အလတ်စားသတ္တုများပုံသွန်းခြင်း၊ Resin-Bonded သဲသွန်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူ 2.Gray Iron / Ductile သံသွန်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းစဉ် 1. ဖောက်သည်မှနမူနာသို့မဟုတ်ပုံဆွဲခြင်း ၂။ ကိရိယာတန်ဆာပလာအဆိုပြုလွှာနှင့်ဆွေးနွေးချက် ၃.၃ ကိရိယာတန်ဆာပလာဒီဇိုင်း ၄။ ကိရိယာထုတ်လုပ်ခြင်း 5. အကြမ်းခံအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်သူ 6.CNC Machining 7.Fitting & Fini ...
Flask သည်အလိုအလျောက်သို့မဟုတ် Semi-automatic ပုံတူမျဉ်းများအတွက်အရေးကြီးသောနည်းပညာပစ္စည်းကိရိယာများဖြစ်သည်။ မြင့်မားသောတိကျမှုနှင့်အပြန်အလှန်လဲလှယ်နိုင်မှုကိုသေချာစေရန်အဆင့်မြင့် CNC စက်ဖြင့်စက်ကို CMM ဖြင့်ရှုထောင့်မှကြည့်ပါ။ သံမဏိ၊ အဆင့်မြင့်တန်းမီးခိုးရောင်သံနှင့်ဂဟေ - သံမဏိပစ္စည်းများအသုံးပြုနိုင်သည်၊ ဘူးများသည်တင်းကျပ်မှုရှိပြီးမြင့်မားသောဖိအားသက်ရောက်မှုကိုခံနိုင်သည်။ သင့်လိုအပ်ချက်အတွက်အမျိုးမျိုးသောဘူးအမျိုးမျိုးကိုဒီဇိုင်းဆွဲထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ပုံဆွဲခြင်းနှင့်ဖောက်သည်များ၏နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များအရကျွန်ုပ်တို့သည်ရေဘူး၊
Casting Machine Systerm ရှိ Sandbox
3. ပုံသွင်းလိုင်းချောချောမွေ့မွေ့ run နိုင်ပါတယ်။
SF အလျားလိုက်အ ၀ တ်နှင့်အစင်း - အစင်း - ညှပ်ဖိအားလိုင်းသည်သဲပစ်ခြင်းကိုအလျားလိုက်ခွဲခြင်း၊
Semi-automatic လောင်းသည့်စက်သည် semi-automatic mode တွင်အသုံးပြုရန်အတွက်သင့်တော်သည်။ အော်ပရေတာက joystick ဖြင့်လမ်းညွှန်သည်။
သဲကန္တာရ, ဘူးမှိုစက်, မှို Casting ဘူး, စက်ထွက်လာကြတယ်, Semi-Automatic မှိုစက်, ဘူးမှို,